‘Ngilindele ukusocongwa noma yinini’ – Bayede News
UBUFAKAZI bakuleli sonto kuKhomishini kaMehluleli uRaymond
by Bayede-News Posted on 26 July 2019 12 August 2019
Ingxenye yepulazi lezimanga i-Estina Dairy Farm, eVrede esifundazweni iFree State
UBUFAKAZI bakuleli sonto kuKhomishini kaMehluleli uRaymond Zondo ngenkohlakalo eyenzeka epulazini i-Estina Dairy, eVrede, esifundazweni iFree State buveze okushaqisayo ngokubulawa kwabalimi abasafufusa ababezohlomula kulolu hlelo nokusatshiswa kwabasaphilayo. Ofakazi batshele iKhomishini ukuthi baphilisa okwezinyamazane ngenxa yezinsongo zokubulawa, nakuba udaba selwabikwa emaphoyiseni kepha akukho akwenzayo ukuphenya ngezinsongo kuboshwe nabasolekayo.
NgoMsombuluko le Khomishini ivule ngobufakazi belungu leSishayamthetho eFree State uMnu uRoy Jankielsohn othe inkampani eyayinobudlelwano nomndeni wakwaGupta i-Estina yayingahlangabezani ngisho nanokukodwa okwakudingeka ukuthi isingaba yingxenye yohlelo lwezigidi lwepulazi lobisi i-Estina, eVrede. Uthe njengengxenye yomsebenzi ayenikwe wona esiShayamthetho, okunye ayekwenza ukubheka ukuqhubeka kwezinhlelo ezithile zikahulumeni okuhlanganisa nalezo ezazingacaci kahle.
UJankielson uthe waqala ukukhathazeka emuva kokuba iphephandaba iMail & Guardian likhiphe umbiko ngokuthinteka kwabakwaGupta kulolu hlelo.
“Kwaqhubeka kwathinta umndeni esasingawuzwisisi kahle ngaleso sikhathi owaduma ngezinto ezingezinhle. Empeleni ukuthi lo mndeni wawusuthinteka epulazini kwanyusa izinhlozi nokukhathazeka kokuthi kungenzeka kube khona okungahambi kahle kulo msebenzi wonke.”
Ngokobufakazi ilinganiselwa ezigidini ezingama-R200 imali eyabekwa eceleni izosetshenziswa ezinhlelweni zabalimi abasafufusa eVrede okwatholakala ukuthi yakhokhwa ngendlela engekho emthethweni enkampanini i-Estina enobuhlobo nomndeni wakwaGupta.
“Okunye engakuveza encwadini yokuqala efungelwe wukuthi uNdunankulu waseFree State wavuma ukuthi kwasetshenziswa izimali zomphakathi ukuthenga indawo eyasetshenziswa egameni lenkampani ezimele i-Estina okwathi ngokuhamba kwesikhathi yadayiswa.”
Ngesikhathi kuqhubeka ubufakazi uMphathiswa Wezokuthuthukiswa koMphakathi eFree State, uNkk uMamiki Qabathe ugxeke labo okwakumele bahlomule kulolu hlelo olwaziwa ngeVrede Dairy Farm ngokukhuluma nabezindaba ngokungaphumeleli kwalolu hlelo okwasetshenziswa kulo imali eyizigidi ezingama-R200 ingxenye enkulu yayo eyakhokhelwa umndeni wakwaGupta.
NgoLwesibili ebhokisini lofakazi kungene uMnu u-Ephraim Dhlamini oyisakhamuzi saselokishini eliseVrede iThembalihle nowayengomunye wabalimi abasafufusa abali-100 ababezohlomula kulolu hlelo. Okunye ababezokuthola yizimoto ezinhlanu ezazizobalekelela emsebenzini wabo. UDhlamini utshele iKhomishini ngochungechunge lwemihlangano abayibamba neziphathimandla kodwa engazange ithele zithelo kubalimi boHlanga abasafufusa eVrede. Lolu hlelo olungazange luqale nokuqala lwamiswa ngonyaka wezi-2014 ipulazi lathathwa iFree State Development Corporation (FDC).
Eqhubeka nobufakazi uDhlamini uthe, uNkk uQabathe owathatha uMnyango Wezolimo emuva kukaMnu uMosebenzi Zwane, waya eVrede eyobhekana nabalimi ababezohlomula kulolu hlelo nabakhuluma nabezindaba bekhala ngokuthi babeshiywe bencela izithupha.
“Wasibizela emhlanganweni esikhomba ngenjumbane ngokukhuluma nabamaphephandaba, kwakuyileso isizathu sokuza kwakhe. Akukho okuhle akusho kodwa wasitshela ukuthi wasithola kanjani isikhundla sokuba umphathiswa nokuthi usebe yilungu le-African National Congress (ANC) isikhathi eside,” kusho Dhlamini. “Wayesithuka nje, egxile kimina nomunye owayezohlomula uMnu uNcongwane, ethi yithina esathinta abezindaba. Inhloso yalowaya mhlangano yayingacacile.
Umhlangano noNkk uQabathe wenzeka emuva kwesikhathi esincane lolu hlelo lumisiwe. Kwababekhona kulowo mhlangano kwakuyiMeya uMnu uTlokotsi Motaung namakhansela abangazange basho lutho ngaphandle kokufa yinsini ngesikhathi sithukwa,” kugcizelela uDhlamini. Uchaze indlela uHulumeni Wesifundazwe eFree State owabathembisa ngayo njengabalimi abasafufusa ukuthi bazohlomula kanjani kulolu hlelo lokukhiqiza ubisi futhi babe namasheya kulo. Batshelwa wuZwane ukuthi inzuzo epulazini izodluliselwa emphakathini waseVrede kusungulwe isikhwama sokusiza abafundi ezikoleni.
Izethembiso zikaZwane azenza kulaba balimi ngowezi-2012 azithelanga zithelo njengoba uhlelo lonke lwamiswa ipulazi lagcina lidluliselwe kuFDC. Abalimi boHlanga ababethwele kanzima bebheke ukuthi uhlelo luzoguqula izimpilo zabo bagcina bethola ukuthi uHulumeni Wesifundazwe eFree State, ngaleso sikhathi owawuholwa uNdunankulu uMnu u-Ace Magashule, usuhlangene nomndeni wakwaGupta.
Ebufakazini bangoMsombuluko uJankielsohn uveze ukuthi naphezu kwayo yonke le mibiko i-Estina yayiqhubeka nokuhlomula ngemali eyizigidi ezingama-R20 njalo ngonyaka kuHulumeni Wesifundazwe nakuba kwase kuphele iminyaka emihlanu uhlelo lwamiswa. Ethula ubufakazi ngesiZulu butolikwe ngesiNgisi kule Khomishini, uDhlamini uchaze indlela ayethola ngayo izinsongo zokubulawa ngokuveza inkohlakalo e-Estina Dairy Farm nokuthi abanye ayenabo babebulawa kanjani.
“Kukhona omunye umlimi owabulawa ngokudutshulwa yimoto emnyama. Sewaze wangcwatshwa. Kuze kube yimanje icala aliqhubeki,” kusho uDhlamini.
UMehluleli uZondo ubuze uDhlamini ngobufakazi bevidiyo ayenabo ngezinsolo zokusatshiswa ngokubulawa.
“Emveni kokuba usukhombise umphathi wesiteshi le vidiyo naze naludingida lolu daba, ngabe walulandela yini udaba nawe noma-ke wathumela amaphoyisa kuwena ukuze aluqhubezele phambili udaba?” UDhlamini uphendule ngokuthi akubanga njalo eqhubeka nokugcizelela nokuthi kumanje umphakathi usahlalele ovalweni. Uthi abakufunayo wukuthi kuxazululwe konke okuthinta i-Estina Dairy Farm ngoba impilo yabo isengcupheni.
Utshele iKhomishini ukuthi usehlala ephethe isibhamu ngisho esontweni ngoba usawutshela umndeni wakhe ukuthi ngeke afe yedwa. UZondo uzwakalise ukukhathazeka ngezikhulu eziphezulu kuHulumeni ezinolwazi olunzulu ngenkohlakalo kodwa ezingafuni ukuzokwethula ubufakazi phambi kweKhomishini. Ngesikhathi ebonga uDhlamini uthe kunabantu abaningi, abanye abasezikhundleni eziphezulu abanolwazi oluningi olumayelana nokugwamandwa kombuso.
UZondo uthe akazi ukuthi ngempela laba bantu banaziphi izinhloso. “Bonke bayazenzisa kube sengathi bayaweseka umsebenzi weKhomishini, kodwa ngakolunye uhlangothi bagodle ulwazi olubucayi oluhambisanayo nalokhu okuphenywa yiKhomishini”.